Mujaahidiinta Alshabaab Oo Dagaal Kula Wareegay Ceelwaaq. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo Dagaal Kula Wareegay Ceelwaaq.
calamada September 16, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dagaal culus ku qaaday degmada Ceelwaaq oo ka mid ah goobaha Kufaarta Nasaarada Kenya iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kaga suganyihiin gobalka Gedo.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo hoostaga degmadaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta degmada Ceelwaaq’iyadoona maleeshiyaatkii Murtadiinta ee ku sugnaay degmada ay u carareen dhanka Xadka Kenya.
Sidoo kale warar hordhac ah oo aan ka helnay dhanka degmada Ceelwaaq ayaa sheegaya in ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo ay ka carareen maleeshiyaatkii maamulka Axmed Madoobe.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sidoo kale weerar ku qaaday deegaanka Ceel-qaalow oo ku dhawaad 20km u jira degmada Ceelwaaq islamarkaana dhaca dhanka Xadbeenaadka Kenya iyo gobalka Gedo halkaasi oo ay difaacyo ku leeyihiin ciidamada Nasaarada Kenya.
Previous: Maleeshiyaat Ka Wada Tirsan Dowlada Federaalka Oo Hiiraan Ku Dagaalamay.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 15-12-1437 Hijri.
1 thought on “Mujaahidiinta Alshabaab Oo Dagaal Kula Wareegay Ceelwaaq.”
Ka cantoobsay alshabaab hukay cadawgu sii yeen dheh
Cagta mariye gooray ridadu cunaysay qaad kii dheh
Cad cad loo jar korantiyo ku wii Eebe caasiyey dheh
Carar yoo warfoo aadan baan cayti la ogayn dheh
Waxa calala uustii ku dhacay waan cajabayaa dheh
Cashiiriyo tol lama aan ahayn cadaw ansaar tiise
Calaal bay ahaayeen samaan oo cid ma ogayn dheh
Ciljigaa madaw baa rartoo waa cabiid saniye
Cadaab naara waa sugi midaan tawbad celinayne
Ciidaa habaartoo kufray cudud ku biirsheeene
Colka naafiyow Eebahay kugu casuun guusha
Cirka iyo dhulkaa laga aqbalay caaway ducadaane
Ciidamada shabaabow lib hela waad cizaw deene
Ceelwaaq cabaad kii kabaxay caalaha ridoobay
Cawaan kii warfaa carar baqada oo cagaha maalye
Cawo iyo nasiib uma lahayn guulu celiyaaye
Asagoo calaacalahayoo caga ku booraysan
Cadaan looma oga meelu dhigay jaanyo cirib toona
Cudud wuxu kufrigu siiyey calala uus baahan
Casar bay kaqaateen shabaab oo la celin waa dheh
Dhashiikaha camiran iyo jantaha caada wada jooga
Ciidaa rasaastaa ka badan cadawgu kayd sheene
Cusbo kulay tahay ka rarare geeshku ceelwaaq dheh
Kayd cuukinaayiyo aduun noo camire gaale
Ceshanoo markale iyo laqaad cadawna naafaw yey